Any italia — ny fahalalam-pomba ara-Kolontsaina — e Diplaomaty
Ara-kolontsaina ny zava-bita no Italia lehibe indrindra loharanom-pireharehana. Inventiveness, saina, ny faharanitan-tsaina sy ny fanabeazana no sarobidy indrindra tamiko. Manokana ny fifandraisana dia scrupulously foana amin’ny valisoa tena sarobidy, indrindra fa ao amin’ny fianakaviana. Ny fianakaviana no zava-dehibe indrindra ny vondrona misy azy any Italia. Ara-kolontsaina ny zava-bita no Italia lehibe indrindra loharanom-pireharehana. Inventiveness, saina, ny faharanitan-tsaina sy ny fanabeazana no sarobidy indrindra tamiko. Manokana ny fifandraisana dia scrupulously foana amin’ny valisoa tena sarobidy, indrindra fa ao amin’ny fianakaviana. Ny fianakaviana no zava-dehibe indrindra ny vondrona misy azy any Italia. Raha efa nampahafantarina nandritra ny raharaham-barotra na ara-tsosialy ny fivoriana, hifandray tanana amin’ny olona rehetra ankehitriny ny lehilahy, ny vehivavy ary ny ankizy. Handray tanana indray rehefa namela. Mampiasa farany ny anarana sy ny tsara anaram-boninahitra mandra manokana nanasa ny italiana hampiantrano na ny mpiara-miasa aminy mba hampiasa ny voalohany anarana. Ny vavy dia foana mampiasa ny zazavavy anarana, indrindra fa eo amin’ny raharaham-barotra sy amin’ny ara-dalàna ny antontan-taratasy. Izy ireo amin’ny ankapobeny dia mampiasa ny manambady anarana na izy rehetra mitambatra ny manambady anarana sy zazavavy anarana any ivelany ny raharaham-barotra. Italiana handray potoana ho an’ny raharaham-barotra fivoriana tena zava-dehibe, ary manantena fa ianao dia hanao toy izany koa ny antso miaraka amin’ny fanazavana raha toa ianao ka nahemotra. Niniana lateness eo amin’ny raharaham-barotra dia heverina ho misavoritaka. Raharaham-barotra karatra dia nifanakalo afa-tsy amin’ny fivoriana voalohany, ary tokony ho natolotra ho mpandray, tsy nanipy azy ireo. Tsy hanome ny raharaham-barotra karatra ho toy izany koa ny olona mihoatra noho ny indray mandeha. Rehefa mandray ny raharaham-barotra karatra, hijery ny anaranao sy ny anaram-boninahitra tsara, dia nametraka izany teo ambony latabatra eo anatrehanao, na ao an-kitapo. Hanorina fifandraisana manokana amin’ny Italiana. Italiana tahaka ny fifanarahana amin’ny olona fantatrao sy matoky. Matetika koa izy ireo mba hino fa ny asa dia tsy tokony ho enta-mavesatra na raisina ho zava-dehibe loatra. Pragmatism sy ny talenta ho an’ny improvisation dia heverina ho ny fanalahidin ny fahombiazana. Protocol, ny fitsipika sy ny fikambanana matetika no tsinontsinoavina. Italiana orinasa fifadian-kanina mba hamantarana sy manararaotra ny akany tsy manao in-lalina fianarana. Stratejika drafitra dia zara raha voasoratra sy tsy maharitra. Raharaha ny fanapahan-kevitra dia matetika vita sy nanaiky manokana alohan’ny fivoriana. Ny tanjon’ny fihaonana dia matetika mba handinika ny toe-po, fahatsapana fanohanana sy hizaha toetra ny rano tsy hanaovana fanapahan-kevitra.
Fisotro madio tsy misy ny mihinana dia tsy fahita firy. Mafy misotro ny tsy mahazatra sy tsy ankasitrahana. Na dia malemy fanahy mamo dia heverina ho tsy mahalala fomba. Vehivavy misotro kely indrindra eto Italia. Rehefa vita ny sakafo, toerana antsy sy ny fikororohana (tines up) mifanila eo amin’ny lovia amin’ny: toerana. Ny fikororohana dia tokony ho amin’ny ankavia sy ny antsy tokony ho eo amin’ny ankavanana ny lelan antsy miatrika ny fikororohana. Italia no lehibe foibe Eoropeana lamaody.
Ny italiana dia chic
Na dia ny olona any amin’ireo tanàna kely mandany be ny vola tao amin’ny wardrobes sy ny akanjo tsara amin’ny fotoana rehetra. Ny lehilahy sy ny vehivavy akanjo conservatively sy amin’ny fomba ofisialy ho an’ny raharaham-barotra (lehilahy: ny fitoriana atao ary fifandraisana vehivavy: akanjo na tiany). Ny vehivavy dia tokony manao teny fitafiana. Ny fanomezam-pahasoavana dia amin’ny ankapobeny tsy dia nifanakalo amin’ny voalohany ny raharaham-barotra fivoriana, na izany aza, manana fanomezam-pahasoavana ao an-kitapo raha ny italiana tompon ny maro hanome anareo ny iray dia ny soso-kevitra. Ny italiana dia misokatra, liana sy handefitra ny hafa ny maha-tokana sy ny fahalalam-pomba. Izy ireo dia handefitra lateness, tsy fahombiazana sy amin-kitsimpo ny fahadisoana, kanefa tsy tiany ny fireharehana sy ny fihetsika maneho fahambanian-toetra. Avy any ivelany ny vehivavy dia afaka manao raharaham-barotra tsy olana lehibe ao Italia. Ny maha-vehivavy na dia ho heverina ho tombony amin’ny toe-javatra sasany. Ihany ny italiana vehivavy eo ambany eo ny asa tsena iray amin’ireo isan-jato ambany indrindra tao Eoropa Andrefana. Vitsy italiana vehivavy mihazona ny mpitantana toerana. Ny Italiana dia amin’ny ankapobeny tsy nanakana rehefa mifanerasera amin’ny ankizilahy na ankizivavy. Flirtation dia ampahany amin’ny fanahin’ny fiainana eto Italia. Nalaina avy nanangona fitaovana amin’ny alalan’ny Varavarankely eo amin’ny izao Tontolo izao, ny hazo fijaliana-kolontsaina fiofanana sy consulting mafy. Tany am-boalohany mifototra amin’ny zavatra hita ao amin’ny Ataovy Ny Tsara indrindra Tongotra Hatrany andian-boky amin’ny alalan’ny
← Ny fiarahana amin'ny aterineto sy hiresaka tsy misy fisoratana anarana, maimaim-poana, ny nifankahita tamin'ny webcam - Surf amin'ny web
Video fanovana miavaka. Download Video Tonian-dahatsoratra mba hamorona ny sarimihetsika ho maimaim-poana →